बाहुनको छोरी झुक्किएर परियारकी बुहारी बनिन्, माइतीले स्वीकार गरे तर दिपेन्द्रले नै यस्तो के गरे ? (भिडियो हेर्नुस्) – live 60media
बाहुनको छोरी झुक्किएर परियारकी बुहारी बनिन्, माइतीले स्वीकार गरे तर दिपेन्द्रले नै यस्तो के गरे ? (भिडियो हेर्नुस्)
चितवन । चितवनकी नीतु नेपाली । वर्षले ३२ । ब्राहमणकी छोरी उनी झुक्किएर परियारकी बुहारी बनिन् । गाडी चालक रहेका दिपेन्द्र नेपालीसंग उनको ख्याल ख्यालैमा विवाह भयो । कक्षा ८ मा पढ्दा उनी कहिले काहीँ सार्वजनिक गाडी चढ्थिन् । त्यही बेलामा दिपेन्द्रसंग चिनजान भएको थियो । उनले दिपेन्द्रलाई खड्का भनेर जानेकी थिइन् ।
तर उनी नेपाली (दलित) रहेछन् । तर पनि उनले केही मानिनन् । विवाह पनि प्रेम गरेर भएको होइन । संगै एउटै गाडीमा आफ्ना अंकलले दिपेन्द्रसंगै देखेपछि उनी घर जान सकिनन् । उनले दिपिेन्द्रलाई भनिन्, मलाई अंकलले तिमीसंग देख्नुभयो अब मलाई घरमा अब के भन्लान् ? म अब फर्केर जाँदिन भने । अनि हामी काठमाडौ गयौं ।
पछि दिपेन्द्र दलित हुन् भन्ने थाहा पाएपछि पनि उनले स्वीकार गरिन् । त्यसपछि माया पनि पलायो । तर दिपेन्द्रले अर्कै ब्यवहार देखाए । उनी फर्केर फेरी माइत गइन् । माइतमा भने उनलाई दलितसंग विवाह गरेर गएकी हो भन्ने कुनै ब्यवहार गरेनन् । माइतीले यति धेरै सहयोग गरेपछि नीतुलाई अहिले आफुले निकै ठूलो गल्ती गरेँ भन्ने लागेको छ ।
तर अचानक दिपेन्द्रले नीतुलाई छाडिदिए । किन छाडे ? के भयो त्यस्तो ? यो विषयमा नीतु के भन्छिन् ? उनका सबै अन्तरकथा सुन्नकोलागी तलको भिडियो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।
← नयाँ वर्ष २०२१ लाई उत्कृष्ट बनाउन घरमा अवश्य राख्नुहोस यी ६ चिज
टिकटकमा २५ लाख फलोअर्स कमाएका दीपा र दमन्ताको म्यूजिक भिडियोमा बढ्दो क्रेज →